माघ, काठमाडौँ । स्याउमा भिटामिन, पोटासियम, क्याल्सियम, म्याग्नेशियम, फस्फोरस ,आइरन…
आउनुहोस् जानौं कसका अगाडि के कुरा भन्नु हुँदैन !
हामी कतिपयलाई यो थाहा हुँदैन कि कुन कुरा कहाँ बोल्ने…
कागती खाँदा हुन्छ यती धेरै फाइदा !
मन्त्र र शरीरको लचकपन
हेर्नुहोस् त यसरी गर्न सकिन्छ व्यक्तित्व विकास !
जीवन सहज बनाउनका लागि यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्